ဘာံကြောင့် မူကွဲပုံစံမျိုးဖြင့် ကြွဆင်းလာမည်နည်း? | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ဘာံကြောင့် မူကွဲပုံစံမျိုးဖြင့် ကြွဆင်းလာမည်နည်း?	December 10, 2009
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:09 am
ယေရှုဘုရားဒုတိယအကြိမ်လောကသို့ အဘယ်ကဲ့သို့သော ပုံစံမျိုးဖြင့် ကြွဆင်းလာမည်နည်း?
ပထမအကြိမ်ကြွဆင်းလာချိန်ကကဲ့သို့ နွားစာခွက်တွင် သိမ်ငယ်စွာ နှိမ့်ချ လျက်လူသားများကိုကယ်တင်ရန် ကြွဆင်းလာခြင်း မျိုးမဟုတ်တော့ပါ။ဒုတိယအကြိမ်လောကသိြုွ့ကဆင်းလာလျှင် လူသားတိုင်းမြင်နိုင်မည့် ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင် အရှင်တကာတို့၏ အရှင်အနေဖြင့် ကောင်းကင်ဘုန်းတန်ခိုး အခြံအရံများနှင့် ကြွဆင်း လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူသားများတို့ကို ကယ်တင်ဖို့မဟုတ်တော့ သကဲ့သို့ အပြစ်ရှိသည်အလျောက် မျက်နှာမလိုက်ဘဲ စီရင်ဖို့ ကြွဆင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူသားများ၏ ပုံသက်သေအတွက် အစေခံဖို့ ကြွဆင်းလာခြင်း မဟုတ်တော့သကဲ့သို့ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်ချုပ်မည့် ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်အဖြစ် ကြွဆင်းလာမည်ဖြစ် ပါသည်။
ယနေ့လူများစွာတို့က ယေရှုကို နွားစာခွက်အတွင်းဖွားမြင်သောယေရှုနှင့် ကားတိုင်ထက်တွင် သေခြင်းဆိုးနှင့်သေသော ယေရှု အဖြစ်သာ အမြင်ရှိပြီး ဘုန်းတန်းခိုးကြီးမြတ်ကာ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည့် အနှိုင်းမဲ့သော ဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ မသိမြင်ချင်ကြတော့ပါ။ လူတို့ကို တစ်နေ့တရား စီရင်မည့်အရှင် ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ မကြားချင်ကြတော့ပါ။